NY FANAGASIANA – Blaogin'i Voniary
“ Lalàna no nanapotehina tsikelikely ny maha-Malagasy. Tsy maintsy lalàna ihany koa no hamerenana ny zo aman-kasiny, ary lalan-tokana no hany izorana ho amin’izany: FANAGASIANA.” P.59
Famintinana: Nanomboka tamin’ny fanjanahan-tany dia nosimbain’ny frantsay ny maha-firenena an’i Madagasikara: ny satam-panjakana, ny fahefana fa indrindra ny tanindrazana sy ny firenena ary ny fahaleovantena. Hatramin’izao aza dia mbola misy tarazo io fahasimbana io, ary vao mainka mihamiariary, ka mila arenina amin’ny fanagasiana.
Ny fanagasiana ny fampianarana dia ilaina mba ahafahana mampitovy lenta ny zaza Malagasy rehetra. Ho mora voaray manko ny lesona rehefa amin’ny teny Malagasy. Ho vita ihany koa ny hamokatra olom-banona feno: manam-pahaizana, mahay miaina sy mijoro amin’ny maha-Malagasy. Dia hanana vintana sahala ny Malagasy entina miatrika ny fiainana.
Ny fanagasiana ny toe-karena indray dia mifototra amin’ny fampiasana ny kely ananan’ny tena sy ny fiezahana tsy hiankina amin’ny sasany. Antoka iray lehibe ahatongavana amin’izany ny fanindrahindrana ny vita Malagasy sy ny fanatsarana hatrany ny vokatra.
Ny fanagasiana ny toe-tsaina sy fomba fisaina koa dia tsy azo atao ambanin-javatra. Trandrahina izay ampiharana ny soatoavina Malagasy eo amin’ny fiainana an-davanandro. Ho fanampin’izany, tokony tsy haka tahaka be fahatany ny ribam-bazaha ny Malagasy fa tsy izany no atao hoe fandrosoana.
Tsy maintsy misy ny mpanoha riana, tsy vitsy ny mpanatsatso! Na eo aza izany, ny fampivoarana ny sarambabem-bahoaka no tokony imasoana fa tsy ny fihazonana ny tombon-tsoan’olom-bitsy.
“Mifantoka eny amin’ny manam-pahaizana vokatry ny taniny ny mason’ny Malagasy tsivakivolo… Angamba aza tsy ny mason’ny Malagasy ihany, fa ny mason’izao tontolo izao koa.” P 59
boky fanagasiana, ED Andriamalala, famintinana fanagasiana, Fanagasiana, fandrosoana, hividy boky fanagasiana, tara-kevitra fanagasiana